Budata Spotify adịchaghị ngwa ngwa - VidaBytes | LifeBytes
Netwọk dị na netwọkụ | | Aplicaciones
Maka ndị chọrọ ịnweta ndepụta egwu Spotify niile mana n'efu, Anyị ga -ekwu maka ụzọ ụfọdụ iji budata Spotify Premium APK n'efu. Ị gaghị enwe nnukwu ndọghachi azụ ma ọ bụ ọdịiche, ebe ị ga -enwe ọrụ niile Spotify Premium na -enye.
Otu n'ime ụzọ izizi enyere bụ ibudata Spotify Beta, nke a bụ ngwa na -enye nchekwa n'agbanyeghị na enwereghị onwe ya kpamkpam. Ị gaghị akagbu ego ọ bụla maka imeputa egwu, belụsọ na ịchọrọ ibudata ya ebe ọ nweghị ọrụ efu.
Site na nbudata Spotify Apk, ị ga -enweta ndepụta nke egwu a na -akpọkarị na nkekọrịta, yana egwu kachasị ọhụrụ, na -ejikwa redio na -akwụghị ụgwọ ngwa ahụ. Nke a bụ otu ị ga - esi mee ya:
1 Etu esi enweta Spotify Premium n’efu?
2 Budata Spotify Premium n'efu site na iji mgbanwe ID mkpanaka
3 Budata Spotify Premium n'efu na -eji sọfụ nnwale efu
Etu esi enweta Spotify Premium n’efu?
Spotify Beta bụ ụdị efu yiri nke Spotify, na iji budata ya, ị ga -abanye njikọ ndị a ka ịpị ya nwee ike ịwụnye Spotify ozugbo:
Spotify APK a na -enye gị ohere ịnwe ọba akwụkwọ nke gị, nke ị nwere ike hazie egwu na ọdịnaya, dabere na nke kachasị amasị gị, ị nwekwara ike ịmepụta listi ọkpụkpọ nke gị.
Ọ bụ ya bụ ụdị nke Spotify Premium ngwa emelitere kpamkpam ka ọ ga -adị ka ị budatara Spotify Premium 2019. Ị ga -echetakwa na ngwa ndị a anaghị akọwa koodu nbudata Spotify ka ị nwee ike kpọọ egwu naanị site na iji otu ngwa.
Budata Spotify Premium n'efu site na iji mgbanwe ID mkpanaka
Ọ bụrụ na nhọrọ nke mbụ abụghị mmasị gị ma ọ bụ na ịnweghị ike ibudata ya, ị nwere ike họrọ ịgbanwe NJ mkpanaka iji budata Spotify Premium n'efu. Nke mbụ, ị ga -ebudata ngwa Spotify iji mepụta akaụntụ dị ka a ga -asị na ị ga -eji ọrụ akwụ ụgwọ, emesịa ọ ga -enye gị, site na ịdebanye akaụntụ ahụ, ịnụ ụtọ oge kacha nta nke iji n'efu, ma ọ bụ dịka ha gosi, oge nnwale nke ngwa ahụ.
Agbanyeghị, ị ga -eburu n'uche na site n'oge ahụ ngwa ahụ na -echekwa NJ mkpanaka gị na ebe nchekwa ya, yabụ ị mepụtara akaụntụ ọhụrụ yana otu ID ị gaghị enwe ike ịhọrọ nnwale efu nke Spotify Premium. Nke a bụ ihe kpatara akwadoro na oge ọ bụla ọrụ efu gị gwụchara, ị ga -eme mgbanwe nke ID smartphone.
Maka nke a, ị ga -abụrịrị onye ọrụ ekwentị gam akporo wee budata ngwa akpọrọ Ngbanwe ID Ngwa, ị nwere ike ịchọta ya na Google Play ngwa ngwa. Mgbe nbudata ngwa ahụ, ị ​​ga -abanye wee pịa bọtịnụ na -egosi okwu "Random" ma si otu a ngwa ga -ahọrọ gị NJ ọhụrụ.
Usoro ọzọ ị ga -emecha bụ ịmalitegharị ekwentị gị nke ọma, mepee Spotify Premium ọzọ wee debanye aha onye ọrụ ọhụrụ, ị ga -amata na agaghị echeta ID gị ma nye gị nnwale nnwere onwe ọzọ. Nke a bụ usoro na -agwụ ike karịa mana ọ ka na -arụ ọrụ nke ọma.
Budata Spotify Premium n'efu na -eji sọfụ nnwale efu
Nhọrọ ọzọ dị na tebụl iji budata Spotify n'efu bụ site na ngwa nnwale nnwale efu. Nke a sitere na ngwa akwụghị ụgwọ ma na -enye gị ohere imepụta kaadị kredit ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu.
Ozugbo ị nwetara aha gị na kaadị mebere gị site na ngwa a, ị ga -enwe ike tinye data ahụ n'ime Spotify Premium ị ga -enwe Spotify n'efu ruo ogologo oge. I kwesịghị ichegbu onwe gị maka ime mpụ, ebe ọ bụ na ụlọ akụ mba ụwa na -akwado Surfing Free Trial.
Naanị ihu ala na nhọrọ a bụ na ọ dị naanị nwa oge maka iOS. Ọ bụrụ na achọrọ maka ndị ọrụ gam akporo, ị ga -emerịrị usoro ọzọ site na “nnweta mbụ” mana banye na webụsaịtị akwụghị ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Aplicaciones » Budata Spotify Premium APK n'efu
Ụdị nje kọmputa na -emerụ sistemụ
Kedu ihe bụ IMEI na otu esi elele ya ngwa ngwa?